i-LinkedIn yiyona yesithathu eyaziwayo kunye nentsangqa yendaba yoluntu. Apha abafuna umsebenzi kunye nabathengisi bahlangana rhoqo imihla ngemihla. Akuyi kuphazamiseka ukuthetha ukuba i-LinkedIn yiCV yakho ye-digital. Apha uya kufuneka ubhale ngamava akho kunye nobugcisa, umvelaphi wemfundo uze uzame ukudibanisa nenani elikhulu labantu. Abantu abaninzi odibanisa nabo, abaphakamileyo baya kuba ngamathuba okuba baqashiwe kwi-intanethi. Nangona xa usenza kwaye ukhuthaza ishishini kwi-LinkedIn, unokufumana lula ukukhutshwa ngokusekelwe kwinani lezonxibelelwano kunye nabalandeli. Khuthaza umxholo wakho apha rhoqo kwaye wabelane ngezinto ezibandakanyekayo phantse.